Ungayikhetha kanjani ibhayisikili lezimpahla elifanele-Izindaba Nemicimbi-Ezokuthutha Zijabulise (Changzhou) Ebike Co., LTD
Ungayikhetha kanjani ibhayisikili lezimpahla elifanele
Isikhathi: 2021-03-23 Ukushaya: 20
Amabhayisikili awaziwa ngokuthwala izinto ezisindayo, kodwa amabhayisikili wezimpahla ayakwenza Uma ufuna ukuthatha izingane zakho zisuka ePhoyinti A ziye ePhoyinti B, kodwa ungakwazi ukuzifaka ebhayisikili lakho elijwayelekile, kunezindlela eziningi ongakusiza ngazo. Ukuze uthole izimpahla ukusuka kwenye indawo uye kwenye, nakanjani kufanelekile ukucabangela ibhayisikili lezimpahla.
Kunezinhlobo ezahlukahlukene ze-cargobike. Ngokuvamile, kunomsila omude, ibhayisikili elinamasondo amathathu, nezinye izinhlobo zamabhayisikili amathathu, kanye ne "minivan." Zonke zinezimakethe ezahlukahlukene futhi ziyahlukahluka ngentengo. Amabhayisikili amaningi manje anganikezwa inketho yokusiza kagesi ozoba yiyo kulula ukugibela ukuyothenga kwakho kwamasonto onke.
Kungaba ukuhlakanipha futhi ukukhetha imodeli eyodwa, efaka zonke izimoto ezisetshenziswayo ngempela: ifreyimu yangemuva, isibhakela, ibhokisi lamaketanga, isisitho selanga, njalonjalo. Iveni yakho izoba nzima, ngakho-ke khetha ingxenye esezingeni elifanele. namabhuleki kufanele avikelwe kahle kulezi zinto, futhi ifreyimu ephansi izokwenza ukugibela nokwehla kube lula lapho kulayishwa.
Kepha okokuqala, udinga ukunquma ukuthi uphetheni: ingane encane kakhulu? Izingane ezincane? Izingane ezindadlana? Omunye umuntu omdala? Noma impahla? Luhlobo luni lwezimpahla? Ngakho-ke, uhambo lwakho luthatha isikhathi esingakanani? Ingabe yisikhathi sezinto ezibalulekile? Ufuna ukugcina ijubane nokuhamba, noma ufuna ibhayisikili elinamandla amathathu kodwa mhlawumbe kancane kancane?
Kubaluleke kakhulu ukucabanga ukuthi uzoyibeka kuphi futhi ube nombono omuhle wesabelomali sakho esiphezulu futhi ukhumbule ukubheka izindleko zezinsiza ezifana netende, izihlalo zezingane namalokhi wekhwalithi ephezulu.
Iseluleko esihle kakhulu ukuzama izinhlobo ezimbalwa, ubone ukuthi bazizwa kanjani kuwe, futhi ubone ukuthi banamandla amangaki ngempela.Hlola imikhawulo yesisindo, kufaka phakathi umgibeli nemoto, nokulayisha.Uma unomngane noma umakhelwane onayo, lokho ekahle: zama okwabo futhi ubabuze ngolwazi lwabo.Bheka izinto ezenza impilo yakho ibe lula, njengohlaka olunezinyathelo eziphansi, amabakaki ahlanganisiwe, nezinsiza eziklanywe kahle ezihambelana nezidingo zakho.
Uzothola ukuthi noma ngabe ukhetha yiphi iveni, kuzokwenza impilo yakho ibe ngcono.
I-PREV: Kungani ukhetha ibhayisikili ye-OTKARGO electrice cargo
OLANDELAYO : Othembekile-woqobo-Uhlobo